Ubuntu Budgie 19.10 misy izao. Ireo ny vaovaonao | Ubunlog
Ubuntu Budgie 19.10 misy izao. Ireo ny vaovaonao
Efa naheno an'izany ve ianao androany nipoaka kinova vaovao an'ny fianakavian Ubuntu? Eny tokoa. Araka ny efa fantatrao na tokony ho fantatrao, ny fianakaviana Ubuntu dia misy rafitra fiasa maromaro, 8 marina. Amin'ireo 8 ireo dia manana zavatra ho an'ny tsiro rehetra isika, toy ny kinova lehibe (Ubuntu), ny KDE, maivana ary voafetra kokoa (Lubuntu) na koa ny kinova ho an'ny tsena sinoa. Fa ny mahaliana antsika amin'ity lahatsoratra ity dia Ubuntu Budgie 19.10, ny famoahana ny tsiro farany tamin'ny Oktobra 2019 ho tonga ao amin'ny fianakavian Ubuntu.
Fotoana vitsy lasa izay dia nanambara ny fanombohany. Tsy toy ny Ubuntu Studio, izay nanambara azy ihany koa fa ny tranokalany mbola tsy nohavaozina (nohavaozina teo am-panoratako) Ubuntu Budgie dia nanavao ny pejiny web minitra taorian'ny fisian'ny sary ISO tao amin'ny mpizara Ubuntu FTP. Miaraka amin'ny sary misy, nohavaozina ny tranokala, ary ny fanambarana natao, ny famotsorana Ubuntu Budgie 19.10 Eoan Ermine dia izao Ofisialy 100%.
Misongadina ao amin'ny Ubuntu Budgie 19.10
Manohana mandritra ny 9 volana, hatramin'ny Jolay 2020.
Fampivoarana farany an'ny birao Budgie (10.5) amin'ny stack GNOME 3.34.
Fampivoarana farany an'ny applet Budgie.
Ny mpamily NVIDIA dia nametraka ho azy avy amin'ny ISO.
Fanohanana voalohany ho an'ny ZFS ho faka.
Nemo dia nohavaozina amin'ny kinova v4.
Fahafahana mamela na manafoana ireo sary masina ao amin'ny birao tian'i Budgie.
Safidy fidirana vaovao, ny kitendry birao ary ny vera manalehibe.
Rehefa mamaky ny naoty famoahana izahay, ny kinova Eoan Ermine an'ny Ubuntu Budgie dia noforonina miorina amin'ny hevitra sy hevitra ireo mpampiasa dia nandefa azy ireo momba ny kinova 18.04, 18.10 ary 19.04. Ity dia dingana iray manan-danja izay tonga enim-bolana mialoha ny atao hoe Ubuntu Budgie 20.04 LTS Focal Fossa. Raha toa ny v18.04 izy io dia tohanana mandritra ny telo taona, hatramin'ny 2023.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » Birao hafa » Ubuntu Budgie 19.10 misy izao. Ireo ny vaovaonao
Kubuntu 19.10 efa misy izao, fantaro izay vaovao
Cloudflare dia manolotra modely hanohanana ny HTTP / 3 ao NGINX